फ्यानलाई म्याडोनाको ‘क्रिसमस उपहार’ (भिडियोसहित)
हलिउड पप स्टार म्याडोनाले आफ्नो नयाँ एल्बम ‘रिबेल हर्ट’ को डेमो लिक भएपछि एकैरातमा ६ गीत रिलिज गरेकी छन्, जसलाई उनले आफ्ना फ्यानलाई ‘क्रिसमसको गिफ्ट’ बताएकी छन् । उनी तत्काल गीत रिलिज गर्ने सोचमा...
नांगो फोटोले बनायो विश्व नम्बर वान !
ओस्कर विजेता अभिनेत्री जेनिफर लोरन्स यस वर्षभर गूगलमा सबैभन्दा धेरै सर्च गरिएकी हलिउड सेलिब्रेटी बनेकी छन् । एक रिपोर्टका अनुसार उनको नग्न तस्बिर लिक भएकै कारण २४ वर्षीया यी अभिनेत्री यस वर्ष सबैभन्दा चर्चित...
ईश्वर भट्टराई काठमाडौं कुलेश्वरकी २१ वर्षीय एलिसा राजबाहक मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो भविष्यको खोजीमा छिन् । ५ फिट ४ इन्च अग्ली एलिसा मिजासिली र मधुर मुस्कानकी धनी छिन् । उनको आकर्षक पर्सनालिटी र स्वभावले उनलाई सबैले...
ब्वाइफ्रेन्डले अर्कैसँग बिहे गर्‍यो : रेखा थापा
मिस कोसी’ मेरो जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । ९ कक्षा पढ्दा नै ‘मिस कोसी’ भएँ । स्कुलमै पत्रकारहरू अन्तर्वार्ता लिन आउँथे । ‘ए म त ठूली पो भएछु’ भन्ने लाग्थ्यो । बिस्तारै पढाइमा रुचि...
कल्पनाको जवानीमा भमरा मख्ख परेपछि…
अनिल खत्री गुल्मी, पुस ३ । नव गायिका कल्पना कुसुमले पहिलो एल्वम ‘भमरा’ सार्वजनिक गरेकी छन । उनले पहिलो एल्वम भमराबाट सांगीतिक जीवन सुरु गर्न लागेको बताएकी छिन । गुल्मी जिल्लामा जन्मेर नव गायिका...
अनुष्कालाई आकाश भन्दा बढी माया गर्छन् मधु
लक्ष्मी काफ्ले बिर्तामोड । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय चर्चामा आएका गीतहरुको भीडमा एउटा गीत हो– ‘यो आकाश भन्दा धेरै माया गर्नेछु तिमीलाई नै’ । केही महिनायता नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चा कमाएको यो गीतको...
रोलेनी स्ट्रसलाई मिस वर्ल्ड २०१४ को उपाधि
लन्डन । दक्षिण अफ्रिकाकी २२ वर्षीया रोलेनी स्ट्रसले सन् २०१४ को मिस वर्ल्डको उपाधि चुमेकी छिन् । विश्वभरिका अर्बौं दर्शकले टेलिभिजनमा हेरेको फाइनल राउन्डमा स्ट्रसले १ सय २० भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ताज...
जसले अञ्जु पन्तलाई उनको श्रीमानसँग मिलन गराए…
बिछोडिएको बर्षौपछि गायिका अञ्जु पन्त र उनका श्रीमान मनोज एउटै एल्बममार्फत बजारमा आइपुगेका छन् । जसका लागि मौका जुराइदिएका हुन्, चर्चित गीतकार गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ समेत रहेका गीतकार उपाध्यायको शनिबार...
को बन्ला कलेज सुन्दरी ?
काठमाडौं । कलेजमा अध्ययनरत किशोरीहरुका लागि “टीभीएस जुपीटर मिस टिन कलेज” प्रतियोगिता राजधानीमा सुरु भएको छ । काठमाडौंको पुतलीसडकमा आयोजित अडिसन कार्यक्रममा पहिलोचरणमा ४० जना किशोरीहरु छनौट भएका छन् । सिजन मिडियाले आयोजना गरेको...
रामकृष्ण ढकाल र यम बराललाई भेटेपछि मोडिएको गोविन्द गुरुङको यात्रा
बैंकिङ र संगीत नितान्त फरक क्षेत्र हुन् । यी दुई क्षेत्रको कुनै तालमेल मिल्दैन । तर, गोबिन्द गुरुङ, जसले बैकिङ पेसासँगै संगीतको सुरतालमा हिडिरहेका छन् । गोविन्द गुरुङ पेसाले बैंकर हुन् । सिभिल बैंकका...
ओलीको आरोपमा सञ्चिता र किशोर
काठमाडौं, २३ मंसिर । ‘नाई न भन्नु ल ३’ चलचित्रबाट अभिनयमा पुनरागमन गरेकी अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेल अहिले अभिनयमा ब्यस्त हुँदै जान थालेकी छन् । अर्थात उनको हातमा एकपछि अर्काे चलचित्र पर्न थालेका छन् ।...
दार्जिलिङ्बाट सुरू ‘सुनामी’को काठमाडौंमा कलाइमेक्स
काठमाडौं, २२ मंसिर । निर्माता, निर्देशक हरि शर्माले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको फिल्म ‘सुनामी’को निमार्ण सुरू गरेका छन् । आफ्नै लेखन रहेको ‘सुनामी’को छायँकन उनले दार्जिलिङ्बाट सुरू गर्न थालेका हुन् । शर्माका अनुसार मंसिर २७...